भृकुटीमण्डपमा नेकपाको चियापानमा दिनभर जे देखियो | Rajmarga
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आज काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
अपराह्न १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म आयोजना भएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता, सांसद, कुटनीतिक, कलाकार पत्रकारलगायतका विभिन्न व्यक्तित्वको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा आएका अतिथिहरुलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरुले स्वागत गरेका थिए् ।
चियापानमा करीब ५० हजार जनालाई निम्तो कार्ड दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली किन आएनन् ?
चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएका का।ण कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ओली बालुवाटारमै आराम गरेर बसिरहेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक नयाँ राजनीतिक कालखण्डमा प्रवेश गरेको बताए । उनले समृद्धि र समाजवादको नयाँ युगको तयारी गर्ने सर्न्दभमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको विशेष महत्व रहेको बताए । चियापान कार्यक्रममा नेताहरु माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ्ग, पम्फा भुसाल, राम बहादुर थापा वादल लगात अन्य शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति देखिन्थ्यो ।
परिकार के-के थियो ?
चियापान कार्यक्रमका सहभागीलाई केरा, लड्डू, खस्ता कचौरी, चियालगायत परिकार दिइएको थियो । यस्तै भीआईपी अतिथिहरुका लागि भने २ हजार स्वान्डविच तयार गरिएको थियो ।
नेकपाले चियापानका लागि ५० हजारलाई निमन्त्रण दिएको बताइएपनि नास्ता भने २० हजार जनाको लागि मात्रै तयार गरिएको बताइएको छ ।
Previous post: सभापति देउवाले भने–प्रहरीलाई बर्खास्त गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति नदिऔँ
Next post: मलेसिया रोजगारी खुल्दै, कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने
भक्तपुर-१ (क) मा कांग्रेसले कब्जा गर्‍यो नेकपाको सीट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विधानबाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हटाइँदै